07/20/12 ~ Myanmar Forward
ဗန်းမော် ရှပ်ပြေးယာဉ် တိမ်းမှောက်မှု နောက်ဆုံးရသတင်း
Posted by drmyochit Friday, July 20, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ယနေ့ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်တိမ်းမှောက်တဲ့ ဗန်းမော် ဆိပ်မှာ ကယ်ဆယ်ရေးများကို တွေ့ ရစဉ်
ယနေ့ မနက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ ကနေ ကသာ မြို့ ကို ထွက်ခွါသွားတဲ့ ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ဟာ ထွက်ထွက်ချင်းမှာ တိမ်းမှောက်မှုဖြစ် ပွါးခဲ့ပါတယ်။ ဒေသခံတွေကတော့ တိမ်မှောက်မှုဖြစ်ပွါးတဲ့ နေရာ
ဟာ ဗန်းမော် ရှပ်ပြေဆိပ်ကမ်း အနီး ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာပဲ တိမ်းမှောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ပေါ်မှာ လူ(၁၀၀)ကျော် ပါရှိပြီး မြစ်ကြီးနား ကျောင်းသား အားကစားပွဲတော်ကို သွားတဲ့ သူတွေ အများစု ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုရေကြီးနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဗန်းမော်ကနေ မြစ်ကြီးနားကို တိုက်ရိုက်သွားလို့ မရပဲ ကသာ-နာဘား ဘူတာကနေ ရထားနဲ့ မြစ်ကြီးနား
သွားကြမဲ့ ကျောင်းသားတွေလို့ သိရပါတယ်။
ရှပ်ပြေရေယာဉ်ပေါ်မှာ ပါသွားတဲ့ဗန်းမော် uni ကဘောလုံးသမား ၂၀ ကမ်းပေါ်ကို ပြန်ရောက်ပြီး uni က ဘောလုံးသများ ၅ ဦးနဲ့ ခရီးသည် ၈၀ ကျော်ကိုကယ်နေတုန်းပါ။ မိုးက တအားရွာနေပြီး ရေယာဉ် ၀မ်းခေါင်းထဲမှာ တာလပတ်အုပ်ပြီး လိုက်ပါသွားသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခေါင်းမိုးပေါ်ပါသွားသူတွေ ပဲ ကယ်တင်နိုင်ပါသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
ရှပ်ပြေးရေယာဉ်ပေါ်မှာ လူအပြည့်လိုက်ပါသွားပြီ ခြေချစရာနေရာတောင်မရှိတဲ့အတွက် ကမ်းပေါ်
ပြန်တက်ခဲ့ရပြီး ကျန်နေတဲ့ ခရီးသည်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
စင်ကာပူနှင့် အမေရိကန်ရေတပ်တို့သည် CARAT ပူးတွဲရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်လျက်ရှိခြင်း
Posted by Anonymous Friday, July 20, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
စင်ကာပူရေတပ်နှင့် အမေရိကန်ရေတပ်တို့သည် (၁၈)ကြိမ်မြောက် CARAT ပူးတွဲရေတပ်စစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းအား ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့အထိ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း လေ့ကျင့် လျက်ရှိကြောင်း စင်ကာပူကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ်ရပ်အရသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွင် စင်ကာပူလေတပ်၊ အမေရိကန် လေတပ်၊ အမေရိကန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့နှင့် အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့တို့ ပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြပြီး နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း ၁၄ဝဝ ခန့်ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွင် ဝေဟင်၊ ရေပြင်နှင့် ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးကဲ့သို့သော သမားရိုးကျပင်လယ်ရေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးများနှင့် ပင်လယ် ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝေဟင်စစ်ဆင်မှုကို အလေးထားလေ့ကျင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ အဆိုပါ လေ့ကျင့်ခန်းတွင် စင်ကာပူရေတပ်နှင့် လေတပ်တို့မှ စစ်သင်္ဘော ၇ စီး၊ ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီး၊ ရေတပ် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းနှင့် လေယာဉ် ၇ စင်းတို့ ပါဝင်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စစ်သင်္ဘော ၄ စီး၊ ရေငုပ်သင်္ဘော တစ်စီး၊ ရေတပ်ရဟတ်ယာဉ် ၃ စင်းနှင့် လေယာဉ် ၆ စင်းတို့ပါဝင်ကြပါသည်။ အဆိုပါ CARAT ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းအား ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ဆီးရီးယားသမ္မတ အာဆတ်အနေဖြင့် ဓာတုလက်နက်များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ထွက်ပြေးလာသော ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ခြင်း
ဆီးရီးယားသမ္မတ ဘတ်ရှာအယ်လ်အာဆတ်အနေဖြင့် အတိုက်အခံများအား ဓာတုလက်နက်များဖြင့် အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းလက်နက်များကိုဖြန့်ဝေပီးဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆီးရီးယားသံအမတ်ကြီး များအနက် ပြည်ပသို့ပထမဆုံးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာခဲ့သူ ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အာဆတ်အား ဆန့်ကျင်၍ ထွက်ပြေးလာသော အရေးပါသည့်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ Nawaf Fares က အာဆတ်၏ သမ္မတနေ့ရက်များ သည် ပြီးဆုံးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အာဆတ်အနေဖြင့် အာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် ဆီးရီးယားပြည်သူအားလုံးကို ချေမှုန်းသုတ်သင်ရန် ပြင်ဆင်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Fares က သတိပေးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် ချောင်ပိတ်မိသောအခြေအနေတွင် ဓာတုလက်နက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အတည်မပြုနိုင်သေးသောသတင်းများအရ ဟုမ်းစ်မြို့တွင် ဓာတုလက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း Fares က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တူရကီနိုင်ငံအနေဖြင့် အီရတ်နိုင်ငံ၏ မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်ပိုင်နက်များအား ထိပါးကျူးကျော်မှုမပြုလုပ်ရန် အီရတ်အစိုးရက သတိပေးပြောကြားခဲ့ခြင်း
တူရကီနိုင်ငံအနေဖြင့် အီရတ်နိုင်ငံ၏ မြေပြင်နှင်ဝေဟင်ပိုင်နက်များအား ထိပါးကျူးကျော်မှုမပြုလုပ်ရန် အီရတ်အစိုးရက ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၎င်းအရေးကိစ္စအား လုံခြုံရေးကောင်စီသို့တင်သွင်းမှုပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း အစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ အလီအယ်လ်ဒါဘတ်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အီရတ်နိုင်ငံ၏မြေပြင်နှင့်ဝေဟင်အား တူရကီနိုင်ငံက ကျူးကျော်ထိပါးမှုအပေါ် အီရတ်အစိုးရက သတိပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးများကောင်စီအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနောက် ဒါဘတ်က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂ဝ၁၄ နှစ်ကုန်တွင် နေတိုးသည် အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံသို့ လွှဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်များကို နေတိုးဦးဆောင်သောတပ်ဖွဲ့များက အာဖဂန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက် လုံခြုံရေးခိုင်မာမှုရှိစေရန် အာဖဂန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အသင့် ရှိကြောင်း သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်းက ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၂ နှစ်အတွင်း လုံခြုံရေး တာဝန်အား အာဖဂန်အမျိုးသားလုံခြုံးရေးတပ်ဖွဲ့သို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး အများပြည်သူကလည်း ယုံကြည် လက်ခံလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲအရာရှိများကသင်တန်းဆင်းပွဲမိန့်ခွန်း၌ သမ္မတ ကာဇိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အာဖဂန်မှ နေတိုးဦးဆောင်သော နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးအထောက်အကူပြုတပ်ဖွဲ့များရုပ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လုံခြုံရေးတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား စတင်ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက စပရက်တလီကျွန်းစုဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
Posted by drmyochit Friday, July 20, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တရုတ်နိုင်ငံသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ အငြင်းပွားလျက်ရှိသော စပရက်တလီ ကျွန်းစု များကို စီမံအုပ်ချုပ်မည့်ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မရှင်တစ်ခု စတင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ Newson သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါကော်မတီအား စပရက်တလီကျွန်းကို အုပ်ချုပ်ရန်ဖွဲ့စည်းထားသော ဟိုင်နန်ပြည်နယ်မှစီရင်စုအဆင့်ရှိ စန်းရှာမြို့တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကော်မတီသည် စန်းရှာမြို့၏ ပထမဆုံးဒေသဆိုင်ရာကွန်ဂရက်ကိုဖွဲ့စည်းရေး၊ ကိုယ်စားလှယ် များရွေး ကောက် ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ရပ် အတည်ပြုရေး နှင့် ဒေသဆိုင်ရာကွန်ဂရက်၏ ပထမဆုံး အကြိမ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရေး တို့အား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စန်းရှာ အစိုး ရအဖွဲ့အား ဗီယက်နမ် နိုင်ငံနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားလျက်ရှိသော ပါရာဆဲလ်ကျွန်းစုရှိ ယောင်ရှင်းကျွန်းတွင် အခြေပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစိုးရအဖွဲ့သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ တရုတ်ငါးဖမ်းသမားများနှင့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၏လုံခြုံမှုကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုသစ်များပြုလုပ်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂက ပြင်ဆင်လျက်ရှိခြင်း
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအပေါ်နောက်ထပ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်များပြုလုပ်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂကလုပ်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း ဥရောပသမဂ္ဂသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဌာနက ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့၌ပြုလုပ်မည့်အစည်းအဝေးအတွင်း ဆီးရီးယား၌ သွေးထွက်သံယိုမှု များအားအဆုံးသတ်စေရန် သမ္မတအာဆတ်၏ အစိုးရအဖွဲ့အား ပစ်မှတ်ထားသော(၁၇)ကြိမ်မြောက် အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများအားအတည်ပြုနိုင်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ဥရောပ သမဂ္ဂအနေဖြင့် ဆီးရီးယားအရာရှိများနှင့်ကုမ္ပဏီများအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွင် ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ် ခြင်းနှင့် ဥရောပရှိ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား သိမ်းဆည်းရန်ပါဝင်ပြီး ယခုပြုလုပ်မည့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုသစ်တွင် အခြားစီးပွားရေးဆိုင်ရာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပူးတွဲဖြေရှင်းနိုင်ရန် ထိုင်းနယ်စပ်ရေးရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မြ၀တီခရိုင်မှ အစိုးရတပ် ခေါင်းဆောင်များ အင်္ဂါနေ့က မဲဆောက်မြို့တွင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနှင့် ထိုင်းဘက်မှ အာဏာပိုင်များ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှု ကိစ္စများကို မဲဆောက်မြို့တွင် ဆွေးနွေးစဉ် (ဓာတ်ပုံ – manager.co.th)
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ထိုင်းဘက်မှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမှတ် (၄) ဒေသ ကွပ်ကဲရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး အူကရစ် နို့ခမ်းဟင်နှင့် မြန်မာဘက်မှ မြ၀တီမြို့ နယ်စပ်ရေးရာ ယာယီတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး ဖြိုးဝေအောင်တို့ ဦးဆောင် တက်ရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ-အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံမှုတွင် Google နှင့် Coca Cola အပါအဝင် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော် ဆွေးနွေးခဲ့
အမေရိကန် နိုင်ငံ အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန့်သတ်ချက် တွေကို ဖြေလျှော့ ပေးပြီးနောက် အမေရိကန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေဟာ
လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက် ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှုတွေ စတင်ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ဆုံရာမှာ Google, Coca Cola စတဲ့ ကုမ္ပဏီများ အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော်က လာရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလို လာရောက် တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခုကို ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့က Sedona ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက် တွေ့ဆုံရာမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်တဲ့ Coca Cola ကုမ္ပဏီ၊ GE Healthcare ကုမ္ပဏီ၊ Google ကုမ္ပဏီ၊ Deloitte Consulting U.S.A စတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အပြင် အခြား ကုမ္ပဏီ ၃၆ ခုက ပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေထဲက တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ GE ကုမ္ပဏီဟာ Sealion Co.Ltd မှတဆင့် ဗဟိုရ်စည် ဆေးရုံ၊ ပန်းလှိုင် ဆေးရုံတို့မှာ ခေတ်မီရောဂါ ရှာဖွေရေးနဲ့ ကုသရေး စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူမှုတွေ အတွက် သဘောတူ စာချုပ်ရေးထိုး ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် GE ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းကို ပြည်တွင်းမှာ ဖွင့်လှစ် သွားဖို့လည်း စီစဉ်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စွမ်းအင်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှု၊ စားသောက်ကုန်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု၊ သတင်း အချက်အလက်နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မှာလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အတွက် နှစ်နိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင် တွေဟာ လေ့လာမှုတွေကို လာရောက် ပြုလုပ်မှု အနေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည့် ညပိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခ နှုန်းထားများ
Posted by drmyochit Friday, July 20, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ဖုန်းဘီလ်စနစ်မှ ငွေဖြည့်ကဒ်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနေသော မိုဘိုင်းဖုန်းကဒ်အချို့၏ ညပိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခမှာကျပ်ငွေ (၅၀)အပြည့် ပေးဆောင်နေရကြောင်း သုံးစွဲသူများထံက သိရှိရသည်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ညပိုင်းမိုဘိုင်းသုံးစွဲခများအား မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ည (၁၁)နာရီမှ နံနက် (၆) နာရီအတွင်း တစ်မိနစ်လျှင် (၂၅) ကျပ်နှုန်းဖြင့် သုံးစွဲခွင့် လျှော့ချပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
''ဘီလ်စနစ်ကနေ ကဒ်စနစ် ပြောင်းပြီး နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် ညပိုင်း (၁၁)နာရီခွဲလောက် ဖုန်းအမြဲပြောဖြစ် တယ်။ ဖုန်းမပြောခင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးမှ ပြောတာပါ။ ညဘက် (၁၁) နာရီ ကျော်ရင် (၂၅)ကျပ်ပဲ ကျရမှာ အခုတော့ (၅ဝ) အပြည့်ဖြတ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။'' ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ WCDMAမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူ သက်ကိုကိုမြင့်က ပြောသည်။
ရှမ်းပစ် ပအိုဝ်းပစ်ဘဝ ရောက်ရလေတဲ့ ကွန်ဟိန်းအမတ် နန်းဝါနု
အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပါရမီဖြည့်ဖက် သူနာပြုချုပ် မဟာသီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည်
Posted by drmyochit Friday, July 20, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
တစ်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ဗိုလ်ချိုရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်သားဖွားဆေးရုံ (ယခင်ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံ)ကို ဇနီးဖြစ်သူ၏ သူငယ်ချင်းသားဖွားသဖြင့် သတင်းမေးရန်မိသားစုနှင့်အတူ ရောက်ခဲ့သည်။
ဒေသတွင်း တရုတ် အစိုးရ သြဇာ ကြီးထွား လာနေတာကြောင့် တောင်တရုတ် ပင်လယ် အငြင်းပွားမှုမှာ အာဆီယံကြား စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ဒေသတွင်းမှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ သြဇာပိုပြီးကြီး ထွားလာနေ တာကြောင့် တောင်တရုတ် ပင်လယ်အတွင်း နယ်မြေ အငြင်းပွားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေက တစုတစည်း တည်းဖြေရှင်းဖို့ လုပ်ဆောင်နေ တာဟာ ပိုပြီးတော့ ရှုပ်ထွေးလာခဲ့တယ်လို့ အကဲခတ်တွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အာဆီယံအဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒေသတွင်း အစည်း အဝေးမှာ ပူးတွဲကြေငြာချက်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၄၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပူးတွဲကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး နယ်မြေ အငြင်း ပွားမှုပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သဘောထားတွေကွဲပြားနေတယ် ဆိုတာကို ပြသလိုက်ပါတယ်။
အခုလို အဖွဲ့အတွင်းမှာ မညီမညွတ်ဖြစ်နေတာဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးဖိအားတွေနဲ့ အများစု သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ သူတို့နဲ့ ပင်လယ်ရေပိုင်နက် နယ်နိမိတ်အငြင်းပွားနေတဲ့ နိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံနဲ့ သာ သီးခြားဆွေးနွေးလိုပြီး အာဆီယံအဖွဲ့တခုလုံးနဲ့ ဆွေးနွေးလိုခြင်းမရှိပါဘူး။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီနာတာလီ ဂါဝါဟာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကို အရေးပေါ် ခရီးထွက်နေပြီး သူ့အဆိုအရတော့ ဒီခရီးစဉ်ဟာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဆီ ယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ညီညွတ်မှုကို ပြန်ပြီးတော့ ရရှိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတော့ သူက တိုးတက်မှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၀န်ကြီးဟောင်းဦးဗဂျမ်း၏ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ 'ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးရစဉ်က'
အတွဲ ၂၉ ၊ အမှတ် ၅၇၈ (၂၀ - ၂၆ ၊ ၇ ၊ ၂၀၁၂) ရက်ကား ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ဖြစ်၍ နေ့ကား စနေနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါက ကျွန်တော်သည် လမ်းပန်း အဆောက် အအုံနှင့် ပြန်လည်ထူထောင် ရေးဌာနကို အုပ်ချုပ်ရသည်ဖြစ်ရာ ထို ဌာန၏ အတွင်းဝန်မှာ အိုင်စီအက်စ် ဦးအုန်းဖြစ်၍ ဒုတိယ အတွင်းဝန်မှာ အိုင်စီအက်စ် ဦးချမ်းသာဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာသေဆုံး၊ဒါဏ်ရာရ၊အိုးအိမ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖြင့် နောင်ဤသို့သောစစ်ပွဲမျိုးထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန်လိုအပ်ကြောင်း စစ်အတွင်းလက်တွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသော ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များမှထင်မြင်ခံစားလာခဲ့ကြသည်။ထိုမှ စတင်၍ ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တွင် မိုင်းရှင်းလင်းရေးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်မည်ဆိုခြင်း
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများသည် စွမ်းရည်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ် သော မိုင်းရှင်းလင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကို ပင်တဂွန်ဌာနချုပ် ပြန်ကြားရေးအကြီးအကဲ George Little က ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဝါရှင်တန်မြို့၌ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းသည် အီရန်နိုင်ငံကို ပစ်မှတ်ထား၍ပြုလုပ်သော လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်ရေတပ်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေများရှိ နေရာအများအပြားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံတကာ ဆွေးနွေးပွဲနှင့် တန်ပြန်မိုင်းစစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း Sunthorn Praditthaen ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဗီယက်နမ်နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ဗီယက်နမ်၌တွေ့ဆုံခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Pham Binh Minh သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ G.L. Peiris နှင့် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့တော်ဟနွိုင်းတွင် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Peiris ၏ ဗီယက်နမ်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်သည် ဗီယက်နမ်- သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့၏ အစဉ်အလာအရချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအား ပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင် နေကြောင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Phan Binh Minh ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး G.L. Peiris က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တိုးတက် အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုများကို ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ထိုင်းအမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယအကြီးအကဲ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဒူလ်ဆန်းဆင်းကော် အား ရဲချုပ်သစ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ တွင် အငြိမ်းစားယူမည့် ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရိုင်ပန်ဒါမာပေါင်၏နေရာတွင် ဆက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအား ဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှင်နာဝပ်ထရာက ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့က အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Bangkokpost သတင်းတစ်ရပ်အရသိရှိရပါသည်။ ၎င်းသည် အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယရဲချုပ် ၃ ဦးအနက် အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ၁ဝ ဦးက ထောက်ခံမဲ ၁ဝ မဲဖြင့် ရဲချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွင် ဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ကကြားနေမဲပေးခဲ့ပါသည်။ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဒူလ်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့၏ ခေတ္တအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပြီး ၎င်း၏ရာထူးခန့်အပ်မှုအား ဘုရင်၏ အတည်ပြုချက်ရရှိမှသာလျှင် ၎င်း၏ဦးဆောင်မှုကာလအတွင်းဆောင်ရွက်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာမူဝါဒသစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်ဟုသိရှိရပါသည်။ ရဲဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဒူလ်အားအတည်ပြုခန့်အပ်ရေး ထိုင်းဘုရင်ထံသို့ ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်အတွင်းတင်ပြသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံက စပရက်တလီကျွန်းစုဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ အငြင်းပွားလျက်ရှိသော စပရက်တလီကျွန်းစုများကို စီမံအုပ်ချုပ်မည့်ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မရှင်တစ်ခု စတင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ Newsnow သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါကော်မတီအား စပရက်တလီကျွန်းကို အုပ်ချုပ်ရန်ဖွဲ့စည်းထားသော ဟိုင်နန်ပြည်နယ်မှစီရင်စုအဆင့်ရှိ စန်းရှာမြို့တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကော်မတီသည် စန်းရှာမြို့၏ ပထမဆုံးဒေသဆိုင်ရာကွန်ဂရက်ကိုဖွဲ့စည်းရေး၊ ကိုယ်စားလှယ်များရွေးကောက်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ရပ် အတည်ပြုရေး နှင့် ဒေသဆိုင်ရာကွန်ဂရက်၏ ပထမဆုံးအကြိမ်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကျင်းပရေး တို့အား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စန်းရှာအစိုးရအဖွဲ့အား ဗီယက်နမ် နိုင်ငံနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားလျက်ရှိသော ပါရာဆဲလ်ကျွန်းစုရှိ ယောင်ရှင်းကျွန်းတွင် အခြေပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစိုးရအဖွဲ့သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ တရုတ်ငါးဖမ်းသမားများနှင့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ၏လုံခြုံမှုကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လူမှုရေးသတင်းတစ်ခုတွင် မဟုတ်မမှန်အသရေဖျက်မှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
အိုမန်နိုင်ငံ လူမှုရေးသတင်းတစ်ခုတွင် အိုမန်ဆူလတန်အစိုးရအပေါ် မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ၍ အသရေ ဖျက်ဝေဖန်ရေးသားသူ ၆ ဦးအား ထောင်ဒဏ် ၁၂ လမှ ၁၈ လအထိ တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယမန်နှစ်က ဆန့်ကျင်မှုအား နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် အသစ်တဖန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့ စီရင်ချက်သည် သဘောထားကွဲလွဲမှုအပေါ်တွင် နှိမ်နင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခုခံကာကွယ်ပေးသူရှေ့နေမှ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ တရားခံများအား ဒဏ်ငွေနှင့် အာခမခံငွေအဖြစ် အိုမင်ငွေရီယယ် ၁ဝဝဝ (ဒေါ်လာ ၂၆ဝဝ)စီ ပေးဆောင်စေခဲ့ကြောင်း ရှေ့နေ Badr al-Bahn က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်မေလ နောက်ပိုင်းကလည်း နိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာများနှင့်ပတ်သက်၍ ရေနံလုပ်ကွက်များတွင် သပိတ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၎င်းဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်စဉ်အတွင်း အိုမန်အစိုးရဆူလတန်ကာဘူးအား ဦးတည်၍ ဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သူ အခြား ၄ ဦးအား ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ကျော်စီချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်မည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းအား တရုတ်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ပယ်ချခဲ့ခြင်း
ဆီးရီးယားနိုင်ငံအားအရေးယူပိတ်ဆို့ရေး အနောက်အုပ်စုကအဆိုပြုရေးဆွဲထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းအား ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ ထောက်ခံမဲ ၁၁ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂ မဲနှင့် ကြားနေမဲ ၂ မဲရရှိခဲ့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့က ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ပယ်ချခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင် ဆီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂကြီးကြပ်ရေး မစ်ရှင် (UNSMIS) အား သက်တမ်း ၄၅ ရက်တိုးရန်နှင့် ဆီးရီးယားအစိုးရအနေဖြင့် လူနေထူထပ်ရာနေရာများမှ လက်နက်ကြီးများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်မရုပ်သိမ်းလျှင် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်၏အခန်း ၇ အရ စစ်ရေးနှင့် မဆိုင်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ရန် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ဆီးရီးယားအတိုက်အခံများအပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးအနေဖြင့် လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုများ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းပြီး နိုင်ငံရေးအရ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆီးရီးယားအစိုးရက အထက်ဖော်ပြပါသတ်မှတ်ချက်များအား ၁ဝ ရက်အတွင်းမလိုက်နာလျှင် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်၏အခန်း ၄၁ အရ လုံခြုံရေးကောင်စီက အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ချက်ချင်းချမှတ်မည်ဟုလည်း အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းတွင် ဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။
လော့ခ်ဟိမာတင်ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်ကြည်းတပ်အတွက် ပဲ့ထိန်းစနစ်ပါ အတွဲလိုက်ဒုံးပျံစနစ် (Guided Multiple Launch Rocket System-GMLRS) များအား (၇)ကြိမ်မြောက် ထုတ်လုပ်ပေးရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၃.၂ သန်းတန်ဖိုးရှိ ကန်ထရိုက်တစ်ရပ်ရရှိခဲ့ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ နြတျညသတ သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါစနစ်သုံးဒုံးပျံများသည် ကီလိုမီတာ ၇ဝ (၄၃ မိုင်ကျော်) အကွာအဝေးအတွင်းရှိ ပစ်မှတ်များကို ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် ပုံစံရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ၎င်းဒုံးပျံစနစ်သည် ရာသီဥတုမရွေး အလျင်အမြန်တပ်ဖြန့်နိုင်စွမ်းရှိပြီး သမားရိုးကျလက်နက်များထက် အကွာအဝေးနှင့်ထိရောက်တိကျမှုပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ GMLRS စနစ်သုံးဒုံးကျည်များသည် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အတွက်စစ်မြေပြင်ယုံကြည်အားထားရမှု ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အဆိုပါဒုံးကျည်များအား အမေရိကန် ကြည်းတပ်၊ မရိန်း တပ်ဖွဲ့၊ အီတလီ၊ ဂျော်ဒန်နှင့် စင်ကာပူတပ်မတော်များသို့ ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဒုံးကျည်ဝယ်ယူရေးအတွက် အီတလီနိုင်ငံက ပထမဆုံးအကြိမ်မှာယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ရောင်းချပေးရန်စီစဉ်ထားပါသည်။ အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်နိုင်ငံများအနေဖြင့် စစ်ဆင်ရေးများတွင် အဆိုပါဒုံးကျည် ၂၂ဝဝ ကျော်ပစ်ခတ်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အဆိုပါ စနစ်များအတွက် အသားတင်ရောင်းရငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆.၅ ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
စင်ကာပူနှင့် အမေရိကန်ရေတပ်တို့သည် CARAT ပူးတွဲရေတပ...
ဆီးရီးယားသမ္မတ အာဆတ်အနေဖြင့် ဓာတုလက်နက်များကို အသုံ...
တူရကီနိုင်ငံအနေဖြင့် အီရတ်နိုင်ငံ၏ မြေပြင်နှင့်ဝေဟ...
၂ဝ၁၄ နှစ်ကုန်တွင် နေတိုးသည် အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ...
တရုတ်နိုင်ငံက စပရက်တလီကျွန်းစုဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ စ...
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရာဇဝတ်မှုများ ထိုင်းနှင့် မြန်မာ ဆေ...
မန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည့် ညပိုင်းဖုန်းေ...
ရှမ်းပစ် ပအိုဝ်းပစ်ဘဝ ရောက်ရလေတဲ့ ကွန်ဟိန်းအမတ် နန...
အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ပါရမီဖြည့်ဖက် သူနာပြု...
အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်နိုင်ငံများ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့တ...
ဗီယက်နမ်နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့မှ နိုင်ငံခြားရေး...
တရုတ်နိုင်ငံက စပရက်တလီကျွန်းစုဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့ စ...
လူမှုရေးသတင်းတစ်ခုတွင် မဟုတ်မမှန်အသရေဖျက်မှုကြောင့် ...